काठमाडाैं उपत्यकामा १४ सहित ३१६ सङ्क्रमित, जम्मा १३ हजार ५६४ पुग्याे – Sabaikoaawaj.com
काठमाडाैं उपत्यकामा १४ सहित ३१६ सङ्क्रमित, जम्मा १३ हजार ५६४ पुग्याे
मङ्लबार, असार १६, २०७७ 6:00:26 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौँ, असार १६ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–९०) सङ्क्रमितको सङ्ख्या मंगलबार १३ हजार ५६४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ३१६ जनामा कोरोना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो । याेसँगै एकहजार ६५७ महिला र ११ हजार ९०७ पुगेका छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथामको लागि भएका प्रयास विश्वको लागि उदाहरणीय भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रा.डा. गौतमले नेपालमा कोरोना भाइरसबाट हुने मृत्युदर अत्यन्त कम भएको बताउनुभयो । अमेरिका, बेलायत, जापान, चीनलगायतको देशको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, उहाँका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलकहरुमा प्रति दशलाखमा भएकाे मृत्युदर बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको तुलनामा कम रहेको छ ।
पीसीआर परीक्षणमा नेपालमा दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतलगायतका देशहरु भन्दा धेरै अगाडि रहेकाे उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा चारहजार ७११ वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार १६, २०७७ 6:00:26 PM